Nepalipatra | News of Bichar
‘कमरेड माधव नेपाल दुईसय वर्ष बाँच्नुहोस्, पदमा रहिरहनुहोस्, शुभकामना !’
कमरेड माधव नेपालले हामीमाथि पटक पटक भद्धा र असिस्ट टिप्पणी गर्नु भयो वहाँको सम्मानका लागि हामीले कुनै टिप्पणी गरेनौ । अस्ती फेरी तल्लो स्तरमा झरेर बोल्नु भयो । अनि मैले वहाँ कै हित हुने गरी जीवनऊपयोगि जवाफ फर्काए । विस्तृतमा
संस्कृति मास्ने श्रृंखलाको अन्त्य कहिले?
केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका अनुसार २०६८ मा गरिएको जनगणनामा नेपालको नेपालको जनसङ्ख्याको वृद्धिदर १.३५ प्रतिशत रहेको थियो। यस पटक गरिएको जनगणनामा जनसङ्ख्याको वृद्धिदर बढ्ने अनुमान विभागको रहेको छ। यसरी बढ्दो जनसंख्याको असर प्रकृतिमा पनि देखापर्न थालिसकेको छ। खुल्ला ठाउँहरु मासिएका छन्। सो क्षेत्रहरुमा घनाबस्ती बनेका छन्। पहिलेपहिले निर्माण भएका पार्टीपौवा, चौतारा, मठमन्दिर सबै विकासको नाममा मासिसकेका छन्।
आज पुस ५ः नेपालमा ‘अस्थिरता’ सुरु भएको दिन
काठमाडौँ। आज पुस ५ गते। आजभन्दा ठिक १ वर्षअघि तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जननिर्वाचित प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए। झण्डै दुई तिहाईको समर्थनमा तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका थिए। तर, पार्टीभित्रको विवादको कारण उनले जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरुको थलो संसदलाई विघटन गरेर देशलाई चुनावमा लैजाने घोषणा गरेका थिए।
जीवनभित्रको निर्लज्जता !
जीवनको पर्याय बनेको भौतिकवाद भित्र यसको महत्वले अन्तरवस्तुलाई गिज्जाईदियो । यहि समयको गतिशिलता भित्रको आलिंङ्गनले अन्तत यसभित्रको बिभक्तिहरुलाई खोज्न बाध्य बनाईदियो । सोचको विविधताभित्र पनि पृथकताको हावी सर्वत्र नभएता पनि एकत्वको महत्व पनि प्रधान बनिदिने रहेछ । हिजोको त्यो स्वर्णिम पल भित्र पनि बादलको गर्जन खोज्न अभ्यस्त आत्माहरु जर्जर बनिदियो ।
आजको प्रमुख राजनीतिक मुद्दाः आर्थिक समृद्धि
अहिले नेपालको राष्ट्रिय राजनीति दुई ध्रुवमा बाँडिएको छ । एउटा ध्रुवमा नेकपा (एमाले) छ, जसले आर्थिक विकास र समृद्धिलाई प्रमुख एजेन्डा बनाउनुका साथै राष्ट्रिय स्वाभिमान, स्वतन्त्रता, सामाजिक सद्भाव र अराजकताको अन्त्यलाई आफ्नो कार्यभार बनाएको छ ।
नेपालमा सामन्ती राजतन्त्र समाप्त भएको परिप्रेक्ष्यमा नेपाली समाजको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको प्रश्न राजनीतिक दलहरूका लागि मुख्य जिम्मेवारी र चुनौतीको विषय बन्न पुगेको छ । अबको नेपाली समाजको रूपान्तरणको दिशा कस्तो हुने ? भन्ने विषय नेपाली राजनीतिको केन्द्रीय विषय बन्न पुगेको छ । किनकि, नेपाली राजनीतिक क्रान्तिबाट यसअघिका क्रान्तिमा जस्तो दिशा निर्धारण हुन सकेको छैन । नेपाली समाज उदार पुँजीवादतर्फ कि समाजवादतर्फ भन्ने कुरा कस्तो शक्तिको नेतृत्वमा कस्तो प्रकारको आर्थिक सामाजिक कार्यक्रम अघि बढाइन्छ भन्ने कुरामा निर्भर बन्न पुगेको छ ।
'कम्युनिष्ट फुटपछि पुनः जनतामा निराशा आएकै हो'
महाधिवेशनको व्यवस्थापकीय तयारीको कुरा गर्दा सबैले बुझ्छन् कि एमालेले आफ्नो काम चुस्त ढङ्गले गर्छ । व्यवस्थित ढङ्गले गर्छ, समयसारिणी बनाएर गर्छ । हामी दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको संघारमा छौं र आवश्यक तयारीको काम दैनिकरुपमा परिणाममुखी गरिरहेका छौं । राजनीतिक अधिकार र कर्तव्यको पालना गर्दै अघि बढ्दा जहाँ पनि समस्या समाधान हुन्छ । विश्वको राजनीतिक अभ्यास पनि यही हो ।
‘राम्रो देखिन जति सजिलो छ साँच्चै राम्रो बन्न उतिनै गाह्रो छ’
हामी भोजन दूषित नहोस् र शुद्ध होस् भन्ने प्रयास गर्छौं, किनकी यसले पेट खराब गर्छ । तर हाम्रो जीवन र मानसिकता खराब गर्ने दूषित विचारतर्फ भने हाम्रो विरलै ध्यान गएको हुन्छ ।
'दुःखलाई हामीले कसरी उपयोग गर्छौ हाम्रो उपलब्धी त्यसैमा भरपर्छ'
हरेक दुःख वा सुखले ब्यक्तिको जीवनमा सामान्यतया ७२ घण्टा मात्र प्रभाव पार्छ । त्यसपछि पुनः त्यो अवस्था सामान्य हुन पुग्छ । तर यति हुँदाहुँदै पनि जब जब जीवनमा संकट, कठिनाई आउँछ, तब लाग्छ यो कठिनाई अब कहिल्यै जाने छैन । बरू यसैले आफुलाई लाने छ भन्ने सोच आउँछ । ब्यक्ति भ्रमित बन्छ ।
'महिला काममा प्रतिबद्ध हुन्छन्, न्यायमा महिलाले भ्रष्टाचार गरेको आजसम्म सुनिएको छैन'
काठमाडौँ । राज्यका प्रत्येक निकायमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता हुनुपर्ने व्यवस्था भए पनि न्याय क्षेत्रमा अहिले पनि महिलाको सङ्ख्या न्यून छ । पछिल्लो समयमा भने महिला आकर्षण केही बढेको देखिएको छ ।
तिहार, महँगी र सरकारको भुमिका
तिहार सुरु भइसकेको छ । धनतेरसबाट प्रारम्भ भएको तिहार आज गोबद्र्धन पुजामा पुगिसकेको छ । भोलि भाइटीका हो । बजारमा सामान किनमेल गर्नेको चर्को भीड देख्न सकिन्छ । तिहारमा दाजुभाइलाई उपहार स्वरुप दिन भाइमसला, मिठाई र फलफुल किन्नेहरुको चाप बढ्दो छ ।